Diego Costa: oo looga yeeray xulka qaranka spain | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Diego Costa: oo looga yeeray xulka qaranka spain
Costa ayaa shaaca ka qaaday inuu isaga go’aansanayo haddii uu taam u yahay inuu ciyaaro ee uusan go’aankaas iska laheyn Mourinho, weeraryahanka ayaana sheegay in macalinka Chelsea uusan ugu baaqin inuu iska diido u soo yeeritaankii xulka Spain.
Weeraryahankii hore ee Atletico Madrid oo dhaliyay sagaal gool todoba kulan oo Premier League xilli ciyaareedkan, ayaa la dhibtoonaya dhibaato muruqa ah tan iyo intii uu yimid Stamford Bridge.
Costa ayaa lagu soo daray xulka Spain ee kulamada isreebreebka Euro 2016 la ciyaaraya Slovakia iyo Luxembourg, halka uu Mourinho aaminsan yahay in 25 jirkaan ay tahay in Vicente del Bosque uu nasasiiyo, weeraryahanka ayaa ku adkeysanaya inuu isagu yahay qofka gaaraya go’aanka ugu danbeeya.
“Ma doonayo inaan bartanka ka galo Spain iyo Chelsea” ayuu Costa u sheegay jariirada Marca.
“Mourinho waxba iima sheegin.
“Qof walba waa inuu ogaado inaan aniga ahay qofka go’aan ka gaaraya sida aan dareemayo. Halkaan waxaan ku heystaa kalsoonida tababaraha, shaqaalaha farsamada, haddii dhibaato jirtana anigaa u sheegi doona.
“Haddii aan halkaan joogo oo aan dhaawacanahay markaas ma ciyaari doono sababtoo ah dhaawaca waa uu ka sii dari doonaa.”